Gaana kasa baako
ɔpepepem nson na ɛka Twi Kasa wɔ Ghana. Ghanafoɔ wɔ kasa ahoroɔ bebree. Twi ka Akan Kasa abusua a yɛfrɛ no Kwa Kasa Abusua no ho. Twi gu mu ahoroɔ pii nanso ne nyinaa yɛ kasa baako a obiara te ase. Yɛwɔ Asante Twi, Bono, Fante, Akuapem Twi, Akyem Twi ɛne nea ɛkeka ho.Ga nso ye kasa a ewɔ Ghana.
Twi a yɛka daadaa no nteaseɛ nyɛ na. Ɛno akyiri no, yɛwɔ abɛbuo ne kasakoa ahoroɔ a ɛwɔ sɛ obi de n'adwene kɔ akyiri ansa na wate aseɛ. Wopɛ sɛ woka obi anim asɛm wɔ mmerɛ a wompɛ sɛ wofom no a, wobu no bɛ. Nti na mpanimfoɔ bu bɛ bi sɛ: "ɔba nyansafoɔ, yɛbu no bɛ, na yɛnnka no asɛm".
Kasakoa yɛ asɛm a ne nkyerɛaseɛ nna tee. Ne saa nti no, obi a n'ani mfiriɛ no rente aseɛ. Yɛmfa no sɛ, obi awu, na ne ba ketewa wɔ hɔ na wompɛ sɛ ɔbɛte sɛ n'awofoɔ awu a, woka no sɛ: "asemasi adane n'ani ahwɛ dan", anaa sɛ, "asemasi aka nkyene agu". Ɛtoaso bio, yɛka kasakoa de anidie ma obi a, odi nim. Ɛno nti, sɛ ɔhene wu a, yɛka sɛ: "Nana kɔ ne kra akyi". Akanfoɔ wɔ gyidie sɛ ɔbi wu a ɔkɔ baabi foforɔ a yɛfrɛ hɔ sɛ
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Twi&oldid=20874"